Vaovao - Maninona ny gasket fonosana no mety hivoahan'ny solika?
Maninona ny gasket fonosana valiny no mety hivoahan'ny solika?
Imbetsaka ny famoahana motera no tsy azo ihodivirana, indrindra raha mampiasa menaka ratsy ianao, be ny loto ao anaty menaka, tsy vitan'ny mampitombo ny hafy sy ny triatra amin'ny motera,
Izy io koa dia mety hiteraka fivoahan'ny solika maotera.
Andao hiresaka momba ny famoahana sasany ao amin'ny fonon'ny valizy.
Inona no mahatonga ny fivoahan'ny valizy valizy? Ahoana no hiatrehana izany?
Inona ny gasket fonosana motera?
Gasket fonosana motera- fantatra fotsiny amin'ny fonon'ny valizy, io no mpikambana famehezana ny tapany ambony amin'ny motera. Voaisy tombo-kase amin'ny menaky ny motera mifanaraka amin'ny lapoely izy io mba tsy hivoaka ny menaka rehefa mandeha ny motera. Ny lohan'ny varingarina mifanaraka amin'ny vatan'ny varingarina dia apetraka amin'ny lohan'ny varingarina ary ny vatan'ny varingarina dia niforona tao amin'ny efitrano famatorana voaisy tombo-kase, tamin'ny toe-javatra sasany, mamela ny fangaro mora vonoina handrehitra ny atiny. Ny fonony misy valizy ambony, ny fonosana varingarina ambany, ny vatan'ny varingarina ambany ary ny fitoeran-diloilo ambany.
Fa maninona ny savaranon'ny valizy no mivaingana ny solika?
1- Ny fahanteran'ny valizy dia manarona gasketleads amin'ny famoahana solika.
Voalohany, ny gasket efi-valizy dia nampiasaina hatry ny ela, miteraka fahanterana ary mamoy ny fahaizany mampikatona ny famoahana solika. amin'ny famoahana solika.
Koa satria ny efi-trano valizy dia miorina amin'ny tapany ambony amin'ny motera, ny menaka dia hikoriana amin'ny lohan'ny varingarina aorian'ny famoahana ny valin'ny valizy, satria miasa ny vatana motera
Amin'ny hafanana avo kokoa, ny menaka mifikitra amin'ny vatan'ny vatana dia hipoitra tsimoramora, ka hamoaka setroka mitroka.
Amin'ity tranga ity, sokafy fotsiny ny fonon'ny valizy ary manolo ny vidin'ny gasket.valve cover gasketreplacement dia tsy avo
2.-Voasakana ny valizy mihodina fanerena crankcase
Voasakana ny vavahady PCV an'ny rafitra rivotra misy crankcase, izay miteraka tsindry be loatra ao anaty masinina ary farany miteraka famoahana solika eo ambany tsindry .Raha tsy voamarina io lesoka io dia hiteraka korontana bebe kokoa any aoriana, toy ny famoahana solika crankshaft sy ny sisa. dia tsotra be ny mamaritra raha miasa ara-dalàna ny valva PCV: amin'ny toe-javatra tsy miasa, ny toetoetran'ny valizy PCV dia azo faritana avy hatrany amin'ny alàlan'ny fanandramana ny banga amin'ny fidirana crankcase amin'ny rantsan-tànanao.
Fomba fanaraha-maso ny rafitra fanamafisam-peo voatery PCV an'ny crankcase:
Ataovy tsy milamina ny motera, esory ny valizy PCV amin'ny fantsom-bolon'ny varingarina, ary zahao raha voasakana ny valizy PCV. Raha apetrakao amin'ny tananao ny valan-tsofina PCV dia hahatsapa banga mahery ny rantsan-tànanao.
Fomba fanaraha-maso iray hafa ny fanesorana ny fantsom-pidirana crankcase amin'ny sivana aorian'ny fametrahana ny valizy PCV, ary manarona moramora ny crankcase amin'ny taratasy taratasy. Rehefa mihena ny tsindry ao amin'ny crankcase (momba ny IMIn) dia tokony ho miharihary fa ny taratasin-tavy dia voasarika mankamin'ny fisokafan'ny fantsom-pohy. Ankoatr'izay, aorian'ny fijanonan'ny motera dia esory ny valva PCV ary zahao amin'ny tanany. Raha misy feo "tsindrio" dia malefaka sy misy ny valizy PCV.
3- Ny tsy fahombiazan'ny faritra hafa amin'ny motera dia miteraka famoahana solika.
Ny fahanteran'ny peratra piston an'ny motera dia miteraka famehezana malalaka. Rehefa mandeha haingana dia haingana ny motera, dia mitranga ny fisehoan'ny boling varingarina, izay mitarika fihenan'ny gazy tafahoatra, ary amin'ny tranga matotra, dia mitarika fahasimbana amin'ny savaran-tsofina sy ny famoahana solika izany.
Ankoatr'izay, noho ny tsy fahampian'ny solika, ny fanangonana karbonina mafy amin'ny fametahana piston, ny fametrahana ny valizy vita amin'ny valizy dia tsy manara-penitra, ka miteraka hery tsy mitovy, sns., Ireo olana rehetra ireo dia hitarika fahasimban'ny famoahana solika gasketand ary manaparitaka.
Fahasimbana amin'ny famoahana ny gasket fonony vita amin'ny fingotra
Tandremo ny antony mahatonga ny fivoahan'ny menaka gasketto amin'ny valizy .Masimbana ny motera.
Misy loza mety hitranga amin'ny fiarovana toy ny afo ateraky ny fivoahan'ny solika ao anaty valizy valizy.
Noho ny famoahana solika ao amin'ny fonon'ny efitrano valizy, ny famoahana solika dia hikoriana amin'ny vatan'ny motera. Noho ny hafanan'ny hafanan'ny vatan'ny motera rehefa miasa ny motera dia hihena tsikelikely ny menaka mifikitra amin'ny vatan'ny motera ary hamoaka fofona mahery. Amin'ny tranga henjana dia hiditra ao anaty fiara miaraka amin'ny rafi-panafihana rivotra ny solika, misy fiantraikany amin'ny tontolon'ny fiara.
Faharoa, rehefa manarona ny fametahana menaka amin'ny lavarangana fanodinana ny injeniera, ny fahavoazana dia tsy dia tsotra loatra, tsiro maranitra, fiara mandeha haingam-pandeha amin'ny fahavaratra mafana, satria avo dia avo ny mari-pana amin'ny fiparitahan'ny setroka, miteraka adhesion amin'ny fandoroana menaka mavesatra isan-karazany, ny fandrehitra ireo singa mirehitra hafa, mety hiafara amin'ny afo amin'ny kompana maotera
Fotoana fandefasana: Jan-19-2021